Magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid: Dabeecada iyo Taallada | Wararka Safarka
Magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid
Luis Martinez | 05/01/2022 11:00 | Ekotourism, Espana
Soo hel magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid aad bay kuugu fududaan doontaa. Sababtoo ah dhismahan buuraleyda ah wuxuu ku siinayaa magaalooyin qurux badan oo ku yaal muuqaallo cajiib ah. Waxay ku taal waqooyi-bari ee Ismaamulka Madrid, markeeda, waxay ka kooban tahay dhowr saf oo buuro ah, oo u badan kuwa Guadarrama, Malagon, Geeska iyo Cabrera.
Dhulkan baaxadda leh waxa uu leeyahay jardiinooyin qaran oo la mid ah kan ay leeyihiin Buurta Guadarrama, daaqa oo kale ah Somosierra, meelaha buurta dhexe sida Dooxada Lozoya iyo kor u kaca in ka badan laba kun oo mitir sida Peñalara meesha ugu sarreysa ama Jilibka Carnations. Oo, oo ay la socdaan waxaas oo dhan, aad leedahay waddooyinka socodka iyo goobaha barafka sida Navacerrada ama Valcotos. Laakiin, dhammaan ka sarreeya, magaalooyin dhowr ah oo ilaaliya dhammaan soo jiidashada miyiga iyo inay yihiin taallooyin dhab ah oo naftooda ku jira. Iyadoo aan jirin wax dheeraad ah, waxaan dooneynaa inaan soo jeedinno magaalooyinkan quruxda badan ee Sierra de Madrid.
2 Rascafría, mid kale oo ka mid ah magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid
3 Dhagxaanta kore
4 Manzanares The Real
7 La Hiruela, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo Sierra de Madrid
9 Garganta de los Montes
Alcázar ee Buitrago del Lozoya
Waxaan ka bilaabeynaa safarkayaga waqooyiga ee Bulshada Madrid si aan u joogno magaaladan quruxda badan ee dhexe ee ku taal inta u dhaxaysa Cabrera iyo Rincón buuraha. Waxaad la yaabi doontaa, marka hore, iyada xayndaabka derbiga shukaansi laga bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Hadda ka hor gudaha deegaanka, waa inaad aragto Alcazar, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad oo la isku daray qaababka Gothic iyo Mudejar, iyo Kaniisadda Santa María del Castillo, oo leh albaabkeeda quruxda badan ee Gothic. Sidoo kale xiisaha ayaa ah buundada Carrabal, oo ku barbaaray qarniyadii dhexe.
Sidoo kale, meesha hoose ee magaalada waxaa ku yaal guriga kaynta, dhisme qarnigii XNUMXaad loo dhisay Dukes of Infantado sidii guri villa ah oo loo qaabeeyey qaabkii naqshadihii Talyaaniga. Andrea Palladio. Laakiin, laga yaabee, waxa ugu yaabka badan ee ku saabsan Buitrago del Lozoya waa iyada Matxafka Picasso. Sida muuqata, timo-jaraha rinjiyeyaashu wuxuu ka yimid magaalada wuxuuna dhaxalsiiyay shuqulladii uu u dhiibay si uu u abuuro bandhiggan. Waxay leedahay ilaa lixdan oo uu u hibeeyay fanaanka Malaga.
Rascafría, mid kale oo ka mid ah magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid
Monastery ee Santa María del Paular
Sidoo kale dooxada Lozoya waa magaaladan albaabka laga galo Beerta dabiiciga ah ee Peñalara, oo leh waddooyin badan oo tamashle iyo buuro ah. Iyaga, waxaad ku gaari kartaa badaha caanka ah ee glacial oo leh moraines iyo wareegyadooda.
Markaad gasho villa, waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato Kaniisadda kaniisadda ee San Andrés Apóstol, la dhisay qarnigii XNUMXaad, the Isbitaalka hore, ee XIV, iyo buundada cafiska. Taas oo kale, waxaad sidoo kale gaari doontaa kuwa adag Monastery ee Santa María del Paular. Keniisadaan waxaa la dhisay dhamaadkii qarnigii XNUMX-aad, in kasta oo ay leedahay dib u soo celin dhowr ah. Kaniisaddu waxay ka taagan tahay dhismaha, laakiin dahabkeeda weyn waa waxa loogu yeero Taxanaha Cartujana oo ka mid ah xeryahooda. Waxay ku lug leedahay konton iyo afar sawir oo ah Vicente Carducho, Casri ah Velázquez, oo ku saabsan taariikhda amarka Carthusian.
Ugu dambeyntii, ka keniisad ah, jidka tuma in aad qaadatid in ay Biyo-dhacyada Purgatory, biyo-dhacyo badan oo ku socda webiga Aguilón oo runtii cajiib ah.
Kaama sheegi karno magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid iyada oo aan la sheegin Patones de Arriba. Sababtoo ah magaaladani waa taallo lafteeda ah. Iyada oo ay guryaha sariiraha, waa tusaale kaamil ah oo ka mid ah dhismaha madow ee Sierra de Ayllon, taas oo ku kasbatay in lagu dhawaaqo goob dano dhaqameed ah.
Laakiin Patones waxay ku siinaysaa wax badan oo aad aragto. Quruxda kaniisadda san jose Waxaa la dhisay qarnigii toddoba iyo tobnaad dhaxalka ee bikradda Saytuun Waxay taariikhdeedu tahay qarnigii XNUMXaad waxayna ku jirtaa qaabka Mudejar Romanesque. Aad ugu dhow kan dambe ayaa ah Pontoon saytuun ah, biyo-xireen la dhisay waagii Isabell II si uu biyaha u gaarsiiyo magaalada Madrid. Iyo sidoo kale goobta qadiimiga ah ee Castro Dehesa de la Oliva, laga soo bilaabo wakhtiyadii Roomaanka ka hor.
Ugu dambeyntii, haddii aad jeceshahay godka, the Godka Reguerillo Waa godka ugu muhiimsan ee dhammaan bulshada Madrid. Si kastaba ha ahaatee, hadda waa xiran yahay. Si aad u gasho, waxaad u baahan tahay ogolaansho gaar ah.
Manzanares The Real
Castillo de los Mendoza ee Manzanares, mid ka mid ah tuulooyinka ugu quruxda badan ee Sierra de Madrid
Cajiib kale oo ka mid ah tuulooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid waa Manzanares. Waxay ku taal xeebta Kaydka Santillana iyo cagta ee pedriza, meel kugu habboon oo aad ku baran karto socodka iyo fuulitaanka. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin Snowdrift ee Countess, halkaas oo uu ku dhashay webiga Manzanares.
Laakiin magaaladu waxay kaloo leedahay taallooyin heersare ah. Astaantiisa weyn waa Qasriga Mendoza, oo la dhisay dhamaadkii qarnigii XNUMX-aad, laakiin xaalad fiican ku jira. Gudaha, waxaad ku arki kartaa ururinta cajalado iyo matxaf ku saabsan qalcadaha Isbaanishka.
Ma aha ka kaliya ee Manzanares lahaa. Waxa kale oo aad arki kartaa hadhaagii qalcaddii hore, kuwaas oo ay ka hadheen laba darbi oo kaliya. Dhankeeda. kaniisadda 'Our Lady of the Snows' Waxaa lagu qiyaasaa in la dhisay dhamaadkii qarnigii XNUMX-aad iyo bilowgii qarnigii XNUMX-aad. Waxay isku daraysaa Romanesque, Gothic iyo astaamaha Renaissance.
Ugu dambeyntii, jidka loo maro La Pedriza, waxaad ka heli doontaa Hermitage ee Marwadayada ee Peña Sacra, kaas oo la dhisay dabayaaqadii lix iyo tobnaad iyo horraantii qarnigii toddoba iyo tobnaad.
Duqa Plaza ee Torrelaguna
Buuraha Sierra de la Cabrera waa magaaladan, oo caan ku ah inay noqoto goobta dhalashada Cardinal Cisneros. Si sax ah isaga waxay ku leeyihiin qayb wanaagsan oo ka mid ah taallooyinkii uu Torrelaguna leeyahay. Kuwaas waxaa ka mid ah, cajiib ah Kaniisadda kaniisadda ee La Magdalena, ee qaabka Gothic iyo Baroque iyo Plateresque altarpieces. Sidoo kale, the Abbey ee Hooyooyinka Fikirka ee Franciscan ee la eryay waxay leedahay macbad qurux badan oo loo nisbeeyo Juan Gil de Hontañón iyo mausoleum Renaissance ah.
Waxaad sidoo kale booqan kartaa Torrelaguna la Hermitage of Our Lady ee kalinimada, laga bilaabo qarnigii afar iyo tobnaad, inkastoo dib loo soo celiyay siddeed iyo tobnaad. Waxay ku taal sawirka ilaaliyaha quduuska ah ee magaalada.
Marka laga hadlayo dhismaha madaniga ah, Hoolka Magaalada, laga bilaabo 1515 iyo hadhaagii derbigii dhexe, kuwaas oo ka mid ah Albaabka Masiixa Burgos. Laakiin taallada weyn ee magaalada waa qasriga salinas, Jewel Renaissance sidoo kale loo aaneeyay Gil de Hontañón.
Aragtida Horcajuelo de la Sierra
Magaaladan yar ee ku taal Sierra de Madrid waxay sidoo kale u taagan tahay qaab dhismeedka dhaqameed, xaaladdeeda dhagax madow. Intaa waxaa dheer, waa goob muhiim ah oo lagu soo booqdo oo ku taal kaniisadda San Nicolás de Bari, oo leh wejigeeda Mudejar, fargeedii dhexe ee baabtiiska iyo gabalkeeda Baroque-ga.
Sidoo kale, waxaad la yaabi doontaa magaalo yar oo kale jiritaanka a Matxafka qowmiyadeed. Laakiin xitaa waxay leedahay foorjo si fiican loo soo celiyay iyo faras kabo leh. Ugu dambeyntii, agagaarka magaalada waa Hermitage of Our Lady of Murugada.
La Hiruela, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo Sierra de Madrid
Nashqada dhaqameed ee La Hiruela
Inkasta oo ay dadku yar yihiin, magaaladani waa mid ka mid ah kuwa sida ugu wanaagsan u ilaashanaya qaabdhismeedka dhaqanka, oo leh aqal-dhagax iyo adobe. Waxa kale oo ay mudan tahay in la booqdo kuwa la soo celiyay Daqiiqda, dhismaha ee Hoolka Magaalada iyo guryaha wadaadka iyo macalinka.
Laakiin ka sii xiiso badan ayaa ah beeralayda dhow, dhisme dhaqameed loogu talagalay in la helo malab oo ku salaysan geedo geedo ah oo godan oo la dejiyey oo lagu daboolay bus ama qoryo. Intaa waxaa dheer, dariiqyo socod aad u qurux badan ayaa ka bilaabma La Hiruela oo ku geyn doona, tusaale ahaan, cajiib Hayedo de Montejo.
Golaha deegaanka ee El Berrueco
Waxay ku taal bari, una dhow gobolka Guadalajara, El Berrueco waxay leedahay nawaaxi xiiso leh. The Cabrera massif iyo xil-ka-qaadista Kaydka El Atazar, halkaas oo aad ku tababaran karto ciyaaraha biyaha sida badmaaxidda.
Magaaladan oo ay ku nool yihiin in ka badan siddeed boqol oo qof ayaa waliba wax badan ku leh. Waxaa ka mid ah taallooyinkeeda, the Kaniisadda Santo Tomás Apostol, oo leh wejigeeda Romanesque Mudejar, iyo, horeba duleedka, ah daar muslimiin, daar laga dhisay dhagaxbuur.
Laakiin, laga yaabee, waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan El Berrueco waa iyada Matxafka Biyaha iyo Dhaxalka Hydrographic u heellan kaabayaasha badan ee haydarooliga ee Sierra de Madrid. Intaa waxaa dheer, isagu maaha kaligii magaalada. Waxa kale oo ay leedahay mid kale oo u heellan dhagax-dhaqameedka deegaanka.
Kaniisadda Pilar ee Garganta de los Montes
Waxaan dhameyn doonaa socdaalkayaga tuulooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid ee joogsanaya Garganta de los Montes, oo ku yaal dooxada Lozoya. Ha joojin kormeerkooda guryaha buuraleyda dhaqanka oo dherer ah. Waxay ka samaysan yihiin dhagax lagu qasay dhoobo iyo quruurux waxayna ku dhammaadaan qiiqa qiiqa u eg.
Laakin sidoo kale waa in aad aragto taallooyin sida Kaniisadaha Santiago Apóstol iyo Nuestra Señora del Pilar, ka Hermitage of Our Lady of the Meadows Fardahana kabaha. Sidoo kale, ha joojin u dhawaanshaha munaarad daawashada, kaas oo aad ka heli doonto aragtiyo cajiib ah dooxada Lozoya.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan Garganta de los Montes waa taalada loo qaybiyey jidadkeeda taasina waxay u taagan tahay muuqaalo nolol maalmeedka magaalada. Waxaa ka mid ah, tan awoowe iyo inanta ay wadaagaan waayo-aragnimada, tan altarera ama tan tuulaha ee sahaminta dooxada.
Gebagebadii, waanu ka hadalnay magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid. Dhammaantood waa mudan in aad booqato. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo la mid ah oo qaali ah. Tusaale ahaan, Puebla de la Sierra, taas oo weli ilaalinaysa isha Carabta; Soto del Real, oo leh kaniisada Baroque ee Fikradda Immaculate iyo buundada Romanesque; Guadarrama, oo leh Duqa Magaalada Plaza ee caadiga ah, ama Cercedilla, oo leh kaniisadeeda San Sebastián. Horey u soco oo baro magaalooyinkan oo ku raaxayso khibrada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Magaalooyinka quruxda badan ee Sierra de Madrid
Meesha lagu dabaasho dolphins gudaha Spain
Talooyin ku saabsan safarka Riviera Maya